रूसी अधिकारीहरु लामो "कम्युनल अपार्टमेन्ट" को अवधारणा को resettlement लागि लाग्यौं छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद अझै पनि विद्यमान छ। बीस अधिक वर्ष को लागि सोभियत प्रणाली, - यो यसको निर्माता बचेका, अति हार्डी हुन बाहिर गरियो।
को पूर्वानुमान अनुसार, पनि धनी मास्को 2018 द्वारा कम्युनल फ्लैट्स छुटकारा प्राप्त गर्न सक्षम हुन, र सेन्ट पीटर्सबर्ग हुनेछ - 2020 मा। तथापि, विशेषज्ञहरु विश्वास यो समय भनेर - एकदम illusive।
एक कम्युनल अपार्टमेन्ट के हो बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्, के मा विशेषताहरु कानुनी शासन अधिकार त्यहाँका बासिन्दाहरूले र के जिम्मेवारी के छ। दुई - रूस मा यस्तो अवस्थामा आज बारेमा 17 लाख मान्छे घर छ विशेष गरी किनभने स्वीडेन जनसंख्या।
नियामक कानुनी प्रेरित वा वाक्यांश हुनत "कम्युनल अपार्टमेन्ट" असामान्य छैन, तथापि, वर्तमान व्यवस्था कुनै पनि यस्तो कुनै परिभाषा छ। र अझै, हाम्रो देशमा तपाईंको यो व्याख्या अवधारणा गर्न सक्षम जो थियो छैन कुनै यस्तो व्यक्ति छ वास्तवमा राज्य स्वामित्वमा एक घर लागि खडा छ, र जो सान्दर्भिक अधिकारीहरूले केही व्यक्तिगत परिवार द्वारा बसे हुन सक्छ। मुख्य कुरा हो - को मान्यता उल्लङ्घन छैन जीवित ठाउँ, प्रति व्यक्ति को क्षेत्रहरु प्रत्येक सेट।
सांप्रदायिक Apartments करार अन्तर्गत भाडादारों प्रदान गर्न सकिन्छ जो धेरै अलग कोठा, हुन्छन् सामाजिक हाइरिङ को, र तिनीहरूलाई केही आफ्नो बासिन्दाहरूले को सम्पत्ति हुन सक्छ। Hallways, बाथरूम र भान्सा एक साधारण रहन क्षेत्र मानिन्छ। मान्छे साधारण इक्विटी को अधिकार को कुरा।
यो राम्रो तरिकाले एक साझा घर धेरै विवाद र कलह छिमेकी बीच को कारण छ कि ज्ञात छ। यो बुझ्ने छ: छैन हरेक महिलाले भान्सा मा उनको छिमेकी भोग्नेछन्, हरेक छिमेकीलाई लामो गलियारे मा बच्चाहरु वा अरूलाई अतिथि को पुकारा सहन हुनेछ। तर, एक कम्युनल मा एक कोठा रूपमा "धन" को मालिक, पूरै साधारण सम्पत्ति मा आदेश कायम राख्ने बोझ फलाउँछ।
तर, धेरै fondly सम्म कम्युनल अपार्टमेन्ट र राम्रो समय लाग्छ। यसको छिमेकी मित्रताको, भान्सा केही रेफ्रिजरेटर ... हो, छैनन् सधैं छुट्टै अपार्टमेन्ट बस्ने भएको छ जो यस अवधारणा, परिचित गर्नेहरूलाई, यो रेट्रो सधैं एक मुस्कान संग सम्झना हुनेछ। छैन विगतमा, र न त वर्तमान छ भनेर सबैभन्दा - चित्र उसलाई लागि हो विशेष गरी जब यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका एक व्यक्ति पूर्ण जब परिवर्तन। यो प्राविधिक प्रगति धेरै टाढा गएको छ कि जस्तो थियो, र तितो नै दृश्यहरु मा कम्युनल सबै।
सम्म 1998, नगरपालिका फ्लैट्स को निजीकरण सबै जीवित को साथ सहमति मात्र सम्भव थियो। तर व्यवस्था छ जुन रूस को संवैधानिक अदालत, को निर्णय द्वारा नागरिकहरु को अधिकार को उल्लंघन भएको भाडादारों प्रत्येक unanimously आफ्ना छिमेकीहरूलाई को सहमति को लागि प्रतीक्षा नगरी रहन ठाँउ निजीकरण सक्छ देखे। साधारण क्षेत्रमा सम्बन्धी विषयमा अझै पनि केही कमीकमजोरी भए तापनि।
सामान्य सिट बस्ने प्रत्येक व्यक्ति को शेयर निर्धारण गर्न सम्पूर्ण घर को क्षेत्र मा आफ्नो कोठा squaring विभाजित गर्नुपर्छ।
त्यहाँ केही सीमितता र छन् कोठा को बिक्री यी अपार्टमेन्ट मा।
उदाहरणका लागि, नयाँ चेक-बासिन्दा को बिक्री को एक परिणाम अन्य कोठा को मालिक को जीवित अवस्थामा एक गिरावट निम्त्याउँछ रूपमा भने, त्यसपछि तिनीहरूले सम्झौता अवैध हुन सक्छ दावी।
वा कम्युनल अपार्टमेन्ट मा परिसर को बिक्री वा खरिद यस्तो नागरिकहरु, वर्तमान कानून कम्युनल बन्दोबस्त अनुमति गर्दैन बसाबास गर्नु भने। उदाहरणका लागि, ती जो संक्रामक सहित गम्भीर रोगहरूबाट, को एक किसिम ले ग्रस्त।
तर, आज एक साझा घर आफ्नो जीवित अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा किफायती तरिका हो।
आवासीय जटिल "क्यासकेड" (Nizhny Novgorod): सुधार योजना संग बिक्री अपार्टमेन्ट को
राज्य बाट एक घर कसरी प्राप्त गर्ने?
व्यावसायिक अचल सम्पत्ति - लगानी र आय कमाउन एक तरिका हो
मास्को मा लक्जरी घरमा: ठेगाना, विवरण,
FGC "नेता": कम्पनी समीक्षा, उत्कृष्ट परियोजनाहरू
"मास्को शहर" - एक अवलोकन: कसरी प्राप्त गर्ने? गरेको पत्ता गरौं
को ट्रक मा र्याली - एड्रेनालाईन शो?
नयाँ उत्पादनहरु गोमेद: नयाँ ई-पुस्तकहरू ब्याकलाइट प्रदर्शन - Android मा अनुसन्धान को एक श्रृंखला
केटीहरु र महिलाहरु को लागि Zemfira नाम को अर्थ: चरित्र, मूल र भाग्य
सफल सिर्जना वा सुनको खण्ड को नियम
बन्दागोभी र मकै संग सलाद: स्वाद को एक किसिम
लुसिफर: को र यो कस्तो अर्थ छ